ब्रा नलगाउँदा स्वास्थलाई असर पर्छ ? यस्ताे छ ब्रा परित्यागको इतिहास
भदौ २४, २०७६ एजेन्सी
बीबीसी। विश्वका सबै समाज पुरुषप्रधान समाज छन् । यसमा धेरै थोरैको कुरा मात्र हो ।
समय–समयमा महिलाले के लगाउने, के नलगाउने भन्ने कुरा पुरुषसोचबाट निर्धारण हुनुहुँदैन भन्दै विरोधको आवाज उठ्ने गर्छ ।
यही विरोध शृङ्खला अनुरुप दक्षिण कोरियामा महिलाहरुले ‘नो ब्रा मुभमेन्ट (ब्रा बहिष्कार अभियान)’ चलाइरहेका छन् ।
अर्का एक जनाले धार्मिक विषय जोडेर सुलीबारे लेखेका छन्, ‘तिमीलाई लज्जा हुनुपर्ने हो । के तिमी यस्तो अवस्थामा धार्मिकस्थल जान सक्छौँ ? पुरुषमात्र होइन, महिलालाई पनि असहज महसुस हुन्छ ।’
महिलालाई घुरेर हेर्नु तिनको स्वतन्त्रता विरुद्ध हुन्छ । तर दुभााग्यवस धेरैजसो देशमा पुरुषहरु सार्वजनिक स्थानमा अपरिचित महिलालाई यसो गर्छन् ।
डा. डेड्रे म्याक्घीको भनाइमा उमेर बढ्दै जादाँ शरीरको ढाँचामा पनि असर पर्छ । छाला पनि झोलिन्छ यसले गर्दा स्तनले प्राकृतिक रुपमा पाउने साहरा पनि कमजोर पर्छ ।
डा. म्याक्घी भन्छन्, ‘महिलाले ब्रा नलगाई एक्सरसाइस गर्दा तिनको स्तनको पिडा बढ्छ । त्यसैले स्पोर्टस् ब्रा स्तनको साथ साथै गर्दन र कमरको पिडा कम गर्न सहयोगी हुन्छ ।’
डा. म्याक्घीका अनुसार स्तन महिलाको यौनिक पहिचान हो । अनुसन्धानहरुमा के देखिएको छ भने जुन महिलाको स्तन कुनै कारणले (जस्तो स्तन क्यान्सर) हटाइन्छ ती पनि आफ्नो छातीको त्यो भागलाई विशेष ख्याल गर्छिन् । त्यस्तै जो महिला आफ्नो स्तन कस्तो देखेको होला भन्ने कुरामा धेरै सचेत रहन्छिन् तिनलाई पनि ब्राले आत्मविश्वास दिने गर्छ ।
मगलवार, भदौ २४, २०७६, ०८:०९:००
जीवन कसरी जीउने ? जिन्दगी बाँच्न सिकाउने २२ सुत्र